#Dawladda waxaay dhayeysaa dhaawacyadii aad geysateen ee umaddan dhaawac kale ha u horseedina | Get Latest News From Horn of Africa |
Home Opinion #Dawladda waxaay dhayeysaa dhaawacyadii aad geysateen ee umaddan dhaawac kale ha u...
#Dawladda waxaay dhayeysaa dhaawacyadii aad geysateen ee umaddan dhaawac kale ha u horseedina
Xildhibaanada kooxda Damu-Jadiid ugu jira baarlamanka Sooomaaliya ayaa billaabay olole la doonayo in lagu dumiyo dowaldda aan weli sanadkan jiran ee Soomaaliya, si loo soo dhiso dowlad kale oo ay qeyb ka yihiin.
Shalay ayaa waxaa warbaahinta qabsaday xildhibaanada kooxdan oo ku baaqaya in xilka laga qaado madaxweynaha iyo raysal wasaaraha, ayaga oo ku eedeeyey wax qabad la’aan dhinac ammaanka ah.
Xildhibaanada ololahan wada waxaa ka mid ah Mahad Salaad, Axmed Cismaan Daqarre iyo Cabdiraxmaan Odawaa, kuwaasi oo intii ay kursiga fariisteen illaa iyo hadda ahaa mucaarad kasoo horjeeda dowladda, oo doonayey inay dhacdo.
Mucaaradnimada ma ahan wax xun, haddii ujeedadeedu tahay in wax lagu saxo, laakiin waxaad is-weydiisaa qofkii mucaaradnimadiisa billaabay xili ay dowladda aysan jirin hal bil, ma yahay qof masuuliyiinta waqti siinaya oo doonaya in wax la xaliyo.
Waa run in labadii toddobaad ee tagay Muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo dhowr ah, hase yeeshee su’aashu waxay tahay imisa qarax ayaa Soomaaliya ka dhacday, imisa kun oo qof ayaase ku dhimatay afartii sano ee ay dalka hogaaminayeen Damu-Jadiid.
Haddii lix bil kasta marka qalad uu dhacaba la yiraahdo ha la beddelo dowladda oo idil, goorma ayay dowladda qaladkeeda khibrad ku qaadaneysaa oo ay saxeysaa.
Marka ay noqoto qaraxyada, waa wax Soomaaliya kaliya aysan la tacaaleyn ee dalal horumaray oo boqolaal sano dowlad ay u dhisneyd ayaa maanta ka hortagi laâ€™ weerarada argagixisada. Intii ay jirtay dowladda cusub ee Soomaaliya waxa ay weeraro argagixiso ka dhaceen, Faransiiska, Britain, Spain iyo Mareykanka oo laba habeen ka hor un dhowr qof lagu dilay magaalada New York.
Waxaan soo jeedin lahaa in dowladda la siiyo waqti, lagan war sugo dagaalka ay iclaamisay ee Shabaabka lagu qaadayo, hase yeeshee in dowlad kasta ayada oo lix bil ka badan aan jirin la yiraahdo hala ceyriyo, waxay guul u tahay Shabaabka.
Waxaa xusid mudan in mar kasta oo dowlad cusub iyo shaqsiyaad cusub ay yimaadaan ay qaadato waqti badan inta ay kala qabsanayaan xaaladaha dalka ku sugan yahay, taasna ay fursad u tahay Shabaabka dadka leynaya.
Xildhibaanada Damu-Jadiid ee hadda qeylada billaabay, waxaan dhihi lahaa Soomaaliya waxaay kasoo kabsan la dahay dhibkii aad geliseen. Afar sano ayaad mushahar la’aan dhigteen ciidamada, ciidamo badan oo Soomaliya loo soo tababaray ayaa hubkooda iibiyey, kadibna iska aaday xaafadahooda markii aad mushaharkooda dhacdeen.
Afeef: Aragtida qoraalkan waxa ay ku gaar tahay qofka ku saxiixan, kamana tarjumeyso tan Axadle .Axadle Media Group, waa mareeg u furan qof kasta inuu ku gudbiyo ra’yigiisa saliimka ah. Kusoo dir qoraaladaada Emailkeena fikraad@axadletimes.com ama alimusa@axadletimes.com Mahadsanid